खोकी रोग होइन, रोगको संकेत हो - Sherpa media Group Nepal
पुस १९, २०७३- हुन त खोकी आफैंमा कुनै छुट्टै रोग होइन । तर खोकी शरीरभित्र पलाईरहेको कुनै अन्य रोगहरुको लक्षण भने अवश्य हो । सामान्य रुघादेखि लिएर दम, टी.बी र क्यानसर जस्ता भयकंर रोगहरुमा पनि खोकी लाग्ने गर्दछ । खोकी लाग्नु शरीरद्वारा कुनै रोगको लक्षणको रुपमा प्रकट गर्ने एक संकेत हो । खोकी को माध्यमबाट हाम्रो शरीरको सिस्टमले शरीरलाई रोगको जिवाणु र किटाणुहरुबाट बचाउने प्रयास गर्दछ । खोकीले गर्दा हामीलाई कष्ट त अवश्य हुन्छ, किनभने खोक्दा शरीरको मांसपेसी तथा अरु अगंहरुमा जोर पर्दछ । खोकी लाग्दा हुने शारीरिक एवं मानसिक कष्ट खोकीको प्रकार र रोगिको शारिरिक अवस्था अनुसार फरक हुनसक्छ । जस्तै कसैलाई खोकी लाग्दा टाउको दुख्ने, छाति दुख्ने हुन्छ भने कसैलाई खोक्दा-खोक्दै पिसाव नै चुहिने हुन्छ, कसैलाइ खोक्दा साँस नै फुलेर आउँछ । यो रोग बच्चा, बुढा, जवान सबैलाइ हुनसक्छ । साधारणजस्तो लाग्ने यो रोगले प्राय सबैलाई दिक्क लाएको हुन्छ
किन लाग्छ खोकी- स्वास नलिको मार्गमा कुनै किसिमको अवरोध आएमा सोको प्रतिकृया स्वरुप खोकी लाग्ने गर्दछ । खोकी लाग्नुको प्रमुख कारणहरुमा घाँटि वा फोक्सोको भित्री भागमा ईन्फेकशन हुनु हो । फेरिगंस (कठंनलि) लेरिगंस (स्वरनलि), ब्रोकंस, लेफ्ट र राईट ट्रेकिया, फोक्सोमा जब कुनैप्रकारको ईन्फेक्शन हुन्छ तब मानिसलाई खोकी लाग्न थाल्छ । आस्थमा (दम)को कारणले, घाँटिमा हुने इन्फेकसनले, फेरिनजाईटिसले, ब्रोकांईटिस, फोक्सोको इन्फेकशन, निमोनियाले, मुटुकोरोगले, जुगाको कारणले, धुलो र धुवाँको एलर्जीले, एसिडिटि र केही औषधिहरुको कारणले गर्दा पनि स्वासनलि सुनिने र उत्तेजित हुनेहुन्छ, जसले गर्दा व्यक्तिलाई खोकी लाग्न सुरु हुन्छ । प्रकार- सामान्यतया खोकी दुईप्रकारको हुन्छ । सुख्खा खोकी र अर्को खकारयुक्त खोकी । यसका पनि धेरै किसिमहरु छन् । जस्तै- हुपिगंकफ, क्रुपिगंकफ, बार्किगंकफ आदि । सुख्खा खोकीमा बिरामिले खोक्दा खकार सजिलैसित आउँदैन । अत: छातिमा धेरै कष्ट हुन्छ । कफ युक्त खोकीमा खोक्दा खकार सजिलैसित निस्किन्छ। कहिले बढि त कहिले कम मात्रामा खकार आउँछ । यसैगरी खोकीको आफ्नो छुट्टा-छुट्टै चरित्र पनि हुन्छ ।
सामान्यखोकी प्राय मौसमी हुन्छ । भाइरस या निमोनियाको कारणले हुन्छ । यसलाई बार्किगंकफ ( लहेर खोकी) पनि भनिन्छ । यसमा घाँटीको माथिको भाग (एपिग्लोटिस) सुन्निएको अवस्थामा लगातार खोकी लाग्छ र हतपत रोकिँदैन । यसमा बिरामिको साँस फुल्न थाल्छ । बुआईनकफमा घाँटीको भोकलकर्ड (स्वरयन्त्र) मा कुनै कारणवश प्यारालाईसिस (लकवा) भयो भने यसप्रकारको खोकी लाग्छ । यसमा लौपिच (स्वरसानो) हुन्छ र स्वरभाँसिएको हुन्छ । ब्रासिकफ स्वरनलि माथि दबाब पर्द लाग्छ । गलाबाट आउने खोकीमा खक्कार युक्त या सुख्खा दुवै हुन सक्छ । एक घाँटीमा खस्स-खस्स मात्र हुन्छ र खोकी लाग्दैन । अर्कोमा भने घाँटी खस्खसाउनुका साथै खोकी पनि लाग्छ । फोक्सो वा मुटुसंम्बन्धित खोकीमा बिरामिले खोक्दा यदि कफको साथै सिटी बजेको आवाज पनि आईरहेकोछ भने यसलाई फोक्सोको खोकी भनिन्छ र यदि खकारबिनाको र सिटीसहित सुख्खा खोकी छ भने यो मुटुको अस्थमा (कार्डियक अस्थमा) हुनसक्छ । यसै गरी खोकीसँग समयको पनि सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । जसलाई मोडालिटि भनिन्छ । बिहान खोकी लाग्नु राम्रो होइन । यो प्रदुषणको कारणले हुनसक्छ या जो बढीमात्रामा धुम्रपान गर्छन् उनीहरुलाई हुनसक्छ । नाईटकफ (रातिखोकी) लाग्नु अस्थमा (दम) भएको खोकी हुनसक्छ । त्यसमा खोकीको साथै बिरामीलाई पसिना पनि आउँछ । यसप्रकारको खोकी टि.बी. या छातीको क्यान्सरको कारणले पनि हुनसक्छ । पहिचान- खोकीको उपचार गर्नु पूर्व चिकित्सकबाट कुन प्रकारको खोकी हो भनि आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकारका टेस्टहरु पनि बिरामिलाई गराइन्छ । जस्तै– रगत, खकार, छातिको एक्स-रे, ईसिजि, इलोक्ट्रोकार्डियोग्राम, एफपिटि( पल्मोनोरिफंक्सनटेष्ट) आदी ।
माथि उल्लेखित रिपोर्टहरुको उपचारमा आफ्नै महत्व छ । यसबाहेक बिरामीको खकारको रगंबाट पनि रोगको पहिचान गरिन्छ । जस्तै- यदि खोक्दा सेतो कफ आउँछ भने यो गलाको ईरिटेसनको कारणले हुनसक्छ‍ । पहेलो या हरियो कफ भए ब्याक्टेरियल खोकी हो । खकारमा रगत आउँछ भने टि.बी. या छाती को क्यान्सर पनि हुनसक्छ अथवा बढी खोकी लागेर गला ताच्छिएर पनि रगत आउन सक्छ । रस्टि (खिया) रगं भए निमोनियाको कारणले खोकी हुनसक्छ । गुलाबी रगंको खकार हार्टफेल या फोक्सो सुन्निन गएको अवस्थामा आउन सक्छ । खकार गन्हाउँछ भने फोक्सो को एब्बसेस(पिलो) को कारणले हुनसक्छ । यदि ज्वरोको साथै बिरामीलाई खोकी पनि छ भने छातीको ईनफेक्सन या निमोनियाले गर्दा हुनसक्छ । खोकीको साथै यदि छातीपनि दुख्छ भने यो फोक्सोसगं सम्बन्धित हुनसक्छ । यदि तीनसप्ताहभन्दा बढि लगातार खोकी लागेमा क्षयरोग (टि.बि.) को परिक्षण गराउनु पर्छ । LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Name Email CommentS